भूतले सारेको बासस्थान | परिसंवाद
भूतले सारेको बासस्थान
कञ्चनमणी दीक्षित	 मङ्लबार, चैत्र ४, २०७६ मा प्रकाशित
एक युरोपेली संस्थाले नेपालको एक दुर्गम गाउँमा राखेको सौर्य उर्जाद्वारा सञ्चालित बत्तिले त्यस गाँउका मानिसहरुको जीवनमा ल्याएको परिवर्तनबारे छलफल कार्यक्रममा भाग लिने मौका पाएको थिएँ । बत्ती रातमा बालिने हुँदा त्यहाँका मानिसहरुको रात्री जनजीवन सहज हुंदै गएको कुरालाई औल्याउँदै चोर, जङ्गली जनावर र भूत प्रेतबाट सुरक्षा मिलेको कुरामा छलफल हुदै थियो । विशेषगरी राती दिसा पिसाब गर्न बाहिर जाँदा भूतसँग स्थानियलाई डर लाग्न छाडेको कुरा रोचक लाग्दो बिषय थियो त्यो कार्यक्रमको ।
भूतको प्रसङ्ग आयो र भूतका बारेमा केही लेखुँ भन्ठानेँ । आफुले नदेखेको कुरामा के लेख्ने ? सानो उमेरमा बुढाबुढीले भूतको कुरा गर्दा, राती देखापर्ने राकें भूत, भकुण्डे भूत, डल्ले भूत र ख्याकको कुरा गर्थे । यी कथा सुनेपछि घर बाहिर भएको चर्पी जान धेरै नै डर लाग्थ्यो । अहिले जस्तो घरभित्र नै चर्पी हुदैनथ्यो । चर्पीमा पनि सानो ‘जेरो वाट’को (Zero Watt) बत्ती हुन्थ्यो जस्ले धेरै उज्यालो नदिने । राती डराउँदै डराउँदै दिसा पिसाब गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । अहिलेको जस्तो सानो वाटको एलइडि को चिमले दिने प्रकाश हुदाँ हो त कति सुरक्षित हुन्थ्यो होला त्यस ताकाको जनजीवन । सहर, बाटो अन्धकार र रातमा जोखिमका साथ गर्नुपर्ने यात्राका आफ्नै कथा थिए बिभिन्न मानिसहरुका ।
धेरै वर्ष पनि भएको छैन । २०४५/२०४६ सालताका सिंहदरवारको पूर्वी ढोका अगाडि वेलुकीको ९ बजेतिर लुटिएका आफन्तले पोखेका व्यथा झलझली याद आँउछ । बाटोमा बत्तीको ब्यवस्था भएको भए उनी जस्ता हजारौं ब्यक्ति सुरक्षित सँग हिड्थे होला रातको समयमा पनि । त्यस बखतको कुरा सम्झदा दुखलाग्छ । हामी बिजुलीको अभावमा कति असुरक्षित रहेका थियौं भन्ने लाग्छ । फेरि प्रसंगतिर लागौं । आफ्नो जीवनकालमा कुनैपनि भूतसँग मेरो प्रत्येक्ष साक्षात्कार नहुँदा यस्ता भूतको अस्तित्व पनि हुन्छ र ? भन्ने अझै लाग्छ मलाई । फेरि, पहिलेका बुढाबुढीले यस्ता भूत आफूले देखेका पनि त थिएनन् नी आफैंले, उनीहरुका पनि बुबा वा हजुरबुबाले देखेको वा भन्नु भएको भन्ने गर्थे ।
यदि भूत हुँदो हो त त्यसताकाका मानिस सबैले देख्नु पर्ने हैन र ? वा कसैकसैले आजकल पनि पक्कै देख्नुपर्ने हो । खै त कसैले भूत भएको प्रमाण दिन सकेका ? नेपालका गाँउ घरतिर जाने हो भने, अझै बिरामी मानिसलाई देखाँउदै भूत, पिचास र बोक्सीले दुख दिएको भन्छन् । वास्तवमा यी मानिसहरु झाडापखाला, आँउ, औलों, आदि रोग लागेका पाइएका छन् । सोझा साझ मानिसलाई धामीझाक्री देखाउनेको नाममा भूत पिचासको नाममा ठगी भएको पाइन्छ ।
मानिसको यही जंगली प्रबृतिले डरलाग्दा रोगहरु जस्तै एड्स, इवोला, सार्स, कोरोना (ब्क्ष्म्क्, भ्दयबि, क्ब्च्क् र ऋइच्इल्ब्० यसरी ब्यापक रुपमा फैलन थालेका छन् । हो न हो यो भूतकै काम हो । यी भूतहरुले मानिसहरुको मष्तिस्कमा बसेर फेरि आफ्नो थलोको विस्तार गर्न र मानिसहरुको जनसंख्या घटाउन लागी परेका छन् । चीनको एक प्रान्तबाट शुरु भएको कोरोना भाइरस अब पृथ्वीका १५० भन्दा बढी देशमा डढेलो झैं सल्केको छ र निर्मुल हुने त छाट नै छैन । यस्को कारणले इटालीजस्तो देशले एक अर्कामा रोग सर्न नदिन पुरै देशका मानिसलाई अलगावमा राख्ने वा हरेकलाई एकान्तमा बस्ने व्यवस्था मिलाउनु परेको छ । बेलायत र उत्तर अमेरीकाका विभिन्न क्षेत्रमा फैलन थालेकोले यसलाई रोक्न यी शक्तिशाली देशलाई पनि धेरै गाह्रो परेको छ । सडक, पसल, विद्यालय र सार्वजनिक स्थलहरु खाली खाली छन् । मानौ, यी ठूला ठूला सहरहरुका बाटामा मानिसको सट्टा भूत हिड्न थालेका छन् ।
एकछीनलाई मानौ भूत छ रे, छ भने कहाँ छ ? खोज्न जानुपरेमा कहाँ जाने ? बढेको जनसंख्याको चापमा भूतहरु अल्पमतमा परेर मानिसहरुबाट टाढा भागेका छन कि ? उनीहरु मानिससँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर पहाडका गुफामा लुकेर बसेका छन् कि ? मैले नदेखेको भएर छैन भन्न पनि त मिल्दैन नि ! त्यसैले मलाई लाग्छ जलबायु परिवर्तनले पृथ्वीको मानिस लगाएत अन्य प्राणीलाई नकारात्मक प्रभाव पारेझैं भएजति भूतले भाग्नुको सट्टा मानिसहरुको मस्तिस्कमा पसेर ती मानिसलाई भाँड्ने काम गरेका छन् । नहुँदो त मानिसहरुले प्रकृति र त्यहाँ बसोवास गर्ने प्राणीहरुलाई माया गर्ने थिए र आफूलाई आश्रय दिने धर्ती र वातावरणलाई उन्मत्त भएर छियाछिया पार्ने र प्रदुषित गर्ने गर्दैनथ्ये । त्यति मात्र हो र मानिसहरुले प्रदुषण फैलाएर आफूलगायत अन्य प्राणीको अस्तित्व संकटमा पु¥याएका छन् । एक अर्कासँग झगडा, प्रतिस्पर्धा र लडाइँ नै मानिसको जीवनको लक्ष्य बनेको छ र विनासको बाटोमा आफूलाई धकेलेका छन् ।
केटाकेटीमा सिनेमा हेर्ने र कथाहरुमा पढ्ने वा अरुबाट सुन्ने गरेका थियौंः ड्रयाकुला र भेम्पायर (Vampire) ले रातको समयमा मानिस लगाएत अन्य प्राणीलाई समातेर उनीहरुको ताजा ताजा रगत पिउने गर्थे । पौराणिक कालका मानिसहरुले आगो उत्पत्ति भएपछि जनावर मारेर ल्याई त्यसलाई पकाएर खान सिकेका थिए । तर हिजोआज फेरि जंगली र पाल्तु जनावरको मासु काँचै खाएको देख्दा भूतको कारणले नै मानिसहरुले मासु काँचै खाने प्रवृत्ति झल्केको त छैन ? भन्ने लाग्छ ।
मानिसको यही जंगली प्रबृतिले डरलाग्दा रोगहरु जस्तै एड्स, इवोला, सार्स, कोरोना (AIDS, Ebola, SARS / CORONA) यसरी ब्यापक रुपमा फैलन थालेका छन् । हो न हो यो भूतकै काम हो । यी भूतहरुले मानिसहरुको मष्तिस्कमा बसेर फेरि आफ्नो थलोको विस्तार गर्न र मानिसहरुको जनसंख्या घटाउन लागी परेका छन् । चीनको एक प्रान्तबाट शुरु भएको कोरोना भाइरस अब पृथ्वीका १५० भन्दा बढी देशमा डढेलो झैं सल्केको छ र निर्मुल हुने त छाट नै छैन । यस्को कारणले इटालीजस्तो देशले एक अर्कामा रोग सर्न नदिन पुरै देशका मानिसलाई अलगावमा राख्ने वा हरेकलाई एकान्तमा बस्ने व्यवस्था मिलाउनु परेको छ । बेलायत र उत्तर अमेरीकाका विभिन्न क्षेत्रमा फैलन थालेकोले यसलाई रोक्न यी शक्तिशाली देशलाई पनि धेरै गाह्रो परेको छ । सडक, पसल, विद्यालय र सार्वजनिक स्थलहरु खाली खाली छन् । मानौ, यी ठूला ठूला सहरहरुका बाटामा मानिसको सट्टा भूत हिड्न थालेका छन् ।
विचार गरौं त कति शक्तिमान रहेछन् अहिलेका भुतहरु । यस्तो अफ्ठ्यारो बेला पनि भूतले मस्तिष्कमा वास गरेका केही ब्यक्तिले खाद्यान्न, औषधी र अत्यावश्यक सामान लुकाउने र बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने गरिराखेका छन् । यो मानिसले गर्ने कार्य नभएर मस्तिष्कमा बास गरेको भूतले नै गराएको जस्तो लाग्छ मलाई । यी भूतहरु जति जति बसाई सार्दैछन् त्यति नै मानिसहरुलाई अफ्ठ्यारो र गाह्रो पार्दैछन् । त्यसैले म विश्वस्त छु कि भूत हुन्छ र मानिसको मस्तिष्कमा बसेर मानिसलाई बिनासतिर धकेल्दै छ ।
बन्दूकको गोली, ओलीको बोली, त्यो भन्दा चर्को सूर्यको बोली